LG G8s ThinQ Smart Green: Ahịa ma malite na Spain | Gam akporosis
LG G8s ThinQ Smart Green malitere na Spain
LG hapụrụ anyị ọtụtụ ụdị n'afọ a, yana n'ime oke ya. Otu n'ime ekwentị ulo oru site na ụlọ ọrụ ahụ bụ G8. Ugbu a, a mara ọkwa ịmalite na Spain nke ụdị ọhụụ, dabere na ngwaọrụ a. Nke a bụ LG G8s ThinQ Smart Green, nke anyị nwere ike ịzụta na Spain na gọọmentị. Ihe nlere anya nke na-ejigide otutu ihe di iche, ma egosiri dika ohuru ohuru.
LG G8s ThinQ Smart Green a bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ Smart Green nso. Site na nzụta ya, a na-enyere aka igbughachi osisi 1.5 nde na ogige Alto Tajo dị na Guadalajara. Yabụ na ọ nwere mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịkwa mkpa na nke a.
Nhazi nke ihe nlereanya a agbanwebeghị ihe ọ bụla na nke G8 nke ewepụtara na February nke afọ a. Anyị nwekwara ọtụtụ nkọwa dị na ngwaọrụ a, gụnyere arụmọrụ nkwụ nke onye ọrụ. N'ihi ya, ọ doro anya na ọ ga-adọrọ mmasị ọtụtụ ndị ọrụ.
LG G8 na-enweta ule ntachi obi kachasị ama
1 Nkọwa LG G8s ThinQ Smart Green
Nkọwa LG G8s ThinQ Smart Green
Ọ bụrụ na anyị lekwasị anya na nkọwapụta nke LG G8s ThinQ Smart Green a, anyị nwere ike ịhụ na ụlọ ọrụ ahụ ahọrọla idebe ọtụtụ ihe ndị mere ka ihe nlereanya a bụrụ otu n'ime ụdị zuru oke ya. Ma enwerekwa mgbanwe, nke na-eme ka ngwaọrụ a nwee ike ịmalite ya na ụgwọ a gbanwere na ahịa. Ndị a bụ nkọwa ya:
Ihuenyo: 6.2-inch OLED na Mkpebi: 1080 x 2248 (FullHD +) na 18,7: 9 ruru
Nhazi: Qualcomm Snapdragon 855
Ebe nchekwa RAM: 6 GB
Nchekwa ime: 128 GB
Igwefoto na-aga n'ihu: 13 MP Wide angle + 12 MP + 12 MP telephoto
Igwefoto n'ihu: 8 MP nwere oghere f / 1.8 na ToF sensor (Z Igwefoto)
Njikọ: WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, NFC, FM Radio, A-GPS, GLONASS, USB 3.1 Cdị C
ndị ọzọ: Rear mkpisiaka agụ, ihu unlock kpọghee ekwt
Batrị: 3550 mAh na QuickCharge 3.0 ngwa ngwa
Usoro njikwa: A gam akporo 9.0 achịcha
Dịka ị pụrụ ịhụ, LG G8s ThinQ Smart Green gosipụtara dị ka otu nhọrọ nke kachasị dị na oke dị na gam akporo. Ihe nhazi dị ike, ezigbo panel na igwefoto na-arụ ọrụ nke ọma, ekele maka ezigbo njikọ nke anya m na azụ. Ya mere, ọ na-agbaso ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ na mpaghara ahịa a. Na mgbakwunye, ọ na-arụ ụfọdụ ọrụ ndị nwere mmasị.
Dịka ọmụmaatụ, anyị na-eme ngosi mmegharị akara na ekwentị. Nke a ga-ekwe omume n'ihi eziokwu ahụ bụ na ekwentị nwere ihe mmetụta ToF na ihu ya. Nke a bụ ihe ga - enyere anyị aka ime omume dị iche iche site na mmegharị ahụ, ọ bụrụhaala na ihe mmetụta a hụrụ ha. Ọ ga-ekwe omume imechi ngwa ma ọ bụ chịkwaa olu na ngwaọrụ ahụ n'ụzọ dị mfe.
Na mgbakwunye, anyị na-ahụ ọrụ abụọ ọzọ nwere mmasị na LG G8s ThinQ Smart Green. N'otu aka ahụ, is IP68 gbaara, iguzogide mmiri na ájá. Anyị nwekwara asambodo ndị agha na ya, nke na-ekwe nkwa iguzogide bump na ọdịda. Yabụ nke a bụ ekwentị siri ike.
LG W10, LG W30 na LG W30 Pro: ụdị ohuru a
Dịka anyị kwurula na mbụ, Enwere ike ịzụta LG G8s ThinQ Smart Green na Spain na ọkwa. Companylọ ọrụ ahụ amalitela ekwentị na weebụsaịtị ya, yabụ anyị nwere ike ịzụta ya ugbu a. Na mgbakwunye, anyị nwekwara ike ịchọta ya na isi ihe ndị ọzọ nke ire ere, ma nke anụ ahụ ma n'ịntanetị, ebe a na-ere ekwentị ndị Korea. N'ihi ya, ọ dị mfe ịzụta ekwentị a.
Maka ọnụahịa ya, ọ bụrụ na ị nwere mmasị ị nweta ekwentị a, ị ga-akwụ ụgwọ euro 699 maka otu ihe ahụ. A na-ebido ya na ọnụahịa dị ọnụ ala karịa nke G8. Agbanyeghị na oge mwepụta nke LG G8s ThinQ Smart Green a, anyị nwere ike ịhụ na n'ụlọ ahịa ụfọdụ ebuputala ụgwọ nke ụdị izizi. Ya mere, ha abụọ kwụrụ ụgwọ euro 699. Kedu ihe ị chere maka ekwentị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG G8s ThinQ Smart Green malitere na Spain
10 smartphones dị ike nke June 2019, dị ka AnTuTu